Sida loo joojiyo ogeysiisyada WiFi ee Android | Androidsis
Markaan meel joogno waa wax iska caadi ah inaan helno shabakado WiFi oo furan. Marar badan, taleefankeenna Android wuxuu noo soo sheegi doonaa inuu jiro shabakad la heli karo, oo muujinaysa ogeysiis, haddii aan rabno inaan ku xirno. Waa wax aad u raaxo badan waana hubaal inay waxtar yeelan doonto, laakiin mar walba ma jecli. Markaa waxbaan ka qaban karnaa.
Haddii ogeysiiskan lagu soo saaray Android uu dhibsado, waad joojin kartaa mar kasta, si aan laguu ogeysiin mar kasta oo ay jirto shabakad WiFi oo furan oo aan ku xirmi karno. Tallaabooyinka tan lagu sameeyo taleefanka waa kuwo aad u fudud, sida aad arki karto.
Waa inaan marka hore fur goobaha telefoonkeena Android. Iyaga dhexdooda, waxaan galnaa qaybta shabakadaha ama isku xirka wireless -ka ka dibna waa inaan galnaa qeybta WiFi. Halkaas waa inaan ku liidnaa ilaa dhammaadka, si aan u awoodno inaan galno ikhtiyaarka tilmaamaya doorbidka isticmaalaha.
Halkaas waa inaan ku daminnaa ikhtiyaarka si aad noogu soo sheegto, in la ogeysiiyo marka la helo shabakad WiFi oo furan. Marka ikhtiyaarkan la damiyo, mar kasta oo ay jirto shabakad furan, ogeysiiska aan u barannay, oo leh dhawaaqiisa, lama muujin doono.
Tani waa mid aad u fudud in lagu helo taleefanka Android. Dabcan, meesha qaybta su'aashu ku taal waa mid is -bedbeddela iyadoo ku xiran nooca nidaamka qalliinka iyo lakabka habaynta ee aad ku haysato taleefankaas. In kasta oo inta badan aysan jirin farqi u dhexeeya tallaabooyinkaas.
Si aad u awooddo awood u yeelo ama curyaaminta ogeysiiska shabakadaha WiFi ee furan wakhti kasta taleefankaaga Android. Sidan, waxaad awoodi doontaa inaad iska illowdo haddii ay aad kuugu dhibsatay sidaas darteedna aysan ahayn inaad dhagaysato mar kasta oo ay jirto shabakad furan aaggaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Khiyaamada Android » Sida loo joojiyo ogeysiisyada WiFi ee Android